यसरी पुरा गर्नुहोस् असल अभिभावकको जिम्मेवारी » Khabarbit
यसरी पुरा गर्नुहोस् असल अभिभावकको जिम्मेवारी
📝 पुष्पराज भट्टराई, काठमाडौं
२० जेष्ठ २०७७, मंगलवार २०:५०
आफ्ना सन्तानसँग अत्यन्त महत्वपूर्ण समय अघिल्लो पटक कहिले बिताउनुभएको थियो ? के तपाईंले आफ्ना छोराछोरीका कुराहरूलाई ध्यान दिएर सुन्ने गर्नुभएको छ ? तपाईंलाई थाहा छ त यतिखेर तपाईंका सन्तानले आफ्नो मनमा कस्ता योजना बनाइरहेका होलान् ? आधिरातमा आँखा मिच्दै काममा निस्किने अभिभावकलाई यस्ता प्रश्न सोध्दा उहाँहरुबाट कस्तो उत्तर पाउन सकिएला ?
पक्कै पनि अभिभावकको प्रायः उत्तर हुन सक्छ । ‘हाम्रा नानीहरू धेरै समय विद्यालयमा नै बिताउने भएकाले यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी शिक्षकले नै लिनुपर्छ । बेलाबेलामा स्कुल गएर फिस तिरिदिएकै छ । बिहान बेलुका ट्युसन कोचिङ हालिदिएकै छ । हामीलाई कहाँ फुर्सद हुन्छ ? व्यापार भन्यो, खेती भन्यो, भान्साको काम गर्नै पर्यो । आफूले धेरै पढको होइन । यसरी सोचेर बस्न कहाँ पाइन्छ ? सर मिसले हो सोच्ने भनेको त ।’
अभिभावकका यी उत्तर सुन्दा सामान्य लागे पनि यसभित्र गहिरो अर्थ लुकेको हुन्छ । यसको मतलब कि त अभिभावकले चाहना हुँदाहुदै पनि समय दिन नसकेका हुन् कि त समय दिन नचाहेको हुनुपर्छ ।
अर्कातिर शिक्षकलाई लाग्दछ । बालबालिका २४ घण्टामा ६ घण्टा मात्र विद्यालयमा रहन्छन् । त्यसैले पढाइबाहेक सबै कुराको जिम्मेवारी अभिभावकले लिनुपर्दछ । प्रायः यसरी अभिभावक र शिक्षकबीच बेलाबेलामा एकआपसमा कटाक्ष चलिरहेको हुन्छ । फेरि वर्तमान् अवस्थामा बालबालिकाका विषयमा एकअर्कालाई दोषारोपण गर्नु नियती नै बनिसकेको छ । यसको निकै नराम्रो प्रभाव कलिला विद्यार्र्थीहरूमाथि पनि प्रत्यक्षअप्रत्यक्ष रूपमा परिरहेको कुरामा ध्यान भने कमै मात्र गएको हुन्छ ।
शिक्षक र अभिभावक वास्तवमा एउटा साइकलका दुई पाङ्ग्रा समान हुन् । साइकल शिक्षा हो भने चालक विद्यार्थी हुन् । हामी सहजै अनुमान लगाउन सक्छौँ अगाडिको पाङ्ग्राभन्दा पछाडिको पाङ्ग्रा थोरै भए पनि अलि फराकिलो हुने गर्दछ । यथार्थमा अभिभावकको भूमिका पनि शिक्षकको भन्दा तुलानात्मक रूपमा अलि जिम्मेवारपूर्ण तथा प्रभावकारी हुने गर्दछ । वास्तवमा अभिभावक र शिक्षक दुवै पाठशालाका गुरु पनि हुन् ।
बाबुआमाको समय सन्तानलाई किन आवश्यक हुन्छ ? धेरै समय दिएका बालबालिकाको स्वभाव कस्तो हुन्छ ? र थोरै समय दिएका बालबालिकाको स्वभाव कस्तो हुन्छ ? हामी हाम्रा छोराछोरीहरूलाई कस्तो रूपमा देख्न चाहन्छौं । त्यसको निर्धारण अभिभावकले दिने समय र व्यवहारमा भर पर्ने हुन्छ । यसरी बालबालिकाको सोच र व्यवहार सकारात्मक बनाउन अभिभावकले खेल्ने असल जिम्मेवारीलाई नै अभिभावन भनिन्छ । सामान्यतया अत्यन्त कडा अनुशासनमा राख्ने, ज्यादै पुलपुल्याउने अनि माया र अनुशासन दुवै प्रदान गर्ने आजका अभिभावकको व्यवहारिक उपाय हो ।
बालबालिकामा अत्यन्त कडा अनुशासनमा राख्ने, ज्यादै पुलपुल्याउने कुराले लामो समयसम्म प्रभाव पर्दैन तर कालान्तरमा यसको परिणाम अत्यन्त निराशाजनक हुने गर्दछ । अर्को कुरा हाम्रा बालबालिकाहरूलाई स्नेह पनि दिऔं र सँगसँगै अनुशासनमा पनि राखौँ भन्ने हो । यसको मतलब अति कडा पनि होइन र अति छाडा पनि होइन भन्ने हुन्छ ।
आजभोलि कोरोनाको त्रास जताततै छ । यस्तो लाग्छ हाम्रा बालबालिकाहरूको मनोरञ्जनको स्रोत इन्टरनेट मात्रै हो । यसमै बिहानदेखि बेलुकासम्म लगामबिनाको घोडामा झैं सवार गरिरहेका छन् । मानौँ ब्रेकबिनाको गाडीमा यात्रा गरिरहेका छन् ।
कल्पना गरौँ त, ब्रेकबिनाको गाडीमा सवार गर्नेहरूको यात्रा कति लामो समयसम्म सुरक्षित होला ? त्यसो भए के तपाईँ आफ्ना सन्तानलाई ब्रेक नभएको गाडीमा राख्नुहुन्छ त ? आफैँसँग प्रश्न गरौँ यस्तो विषम परिस्थितिमा असल अभिभावकको जिम्मेवारी कसरी पुरा गर्न सकिन्छ ?
हाम्रो अनुभवले भन्दछ, घर र परिवार भनेको बच्चाको व्यवहार सिकाउने वा बिगार्ने मुख्य आधारभूत सामाजिक संस्था हो । अहिले नानीबाबु पढ्ने स्कुलका चौरमा हरियो दुबोमात्रै उम्रिएको छ । त्यहाँ न पढाउन मिल्छ न त रमाउन मिल्छ । त्यसैले लकडाउनको विकल्पमा बगैंचा र भान्साकोठा सिक्न र सिकाउनका लागि सबैभन्दा ठुलो लाइब्रेरी हुन सक्छ । जहाँ व्यवहार र संस्कार सिकाउन सकिन्छ ।
आजभोलि अभिभावकहरू मायाममताको नाममा आफ्ना सन्तानलाई आवश्यकताभन्दा बढी स्वतन्त्रता दिन्छन् । सबै आवश्यकता नै पुरा गरिदिने अभिभावक मानौं एटीएम मेसिन हुन् उनीहरुका । जे भन्यो त्यही जुटाइदिने । जति भन्यो त्यति जुटाइदिएर वर्तमान समय नै अभिभावकले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएपछि बच्चालाई व्यबहार कसले सिकाउने ? आत्मनिर्भरको बाटो कसले देखाइदिने ?
यथार्थमा समयको बहावसँगै जाँदा अहिलेका हाम्रा बालबालिकाहरूको सानो उमेरदेखि खेल्ने खेलौना नै विकृत हुँदै गएको हामी सहजै देख्न पाइरहेका छौँ । आज सम्पत्तिको पछि लागेका अभिभावकहरु मेरो सपना, मेरो संसार, मेरो मुटुको टुक्रा भनिने आफ्ना बच्चाको गतिविधिका बारेमा बेखबर छन् ।
अभिभावकको समय नपाएपछि साथी, सङ्गत, टिभी, मोबाइल र स्कुले परिवेशका कारण उनीहरू हात हतियारजस्तै स–साना बन्दुक, गुलेली, तथा पब्जीजस्ता आव्रmामक शैलीका खेलौनामा रमाइरहेका हुन्छन् । ती खेलौनाको नकारात्मक प्रभाव बालमस्तिष्कमा कसरी परिरहेको हुन्छ भन्ने ख्याल अभिभावकलाई हुँदैन ।
केही क्षणको आनन्दका लागि या भनौँ टि.भी.मा देखिएको काल्पनिक घटनालाई व्यवहारमा प्रयोग हेरौँ न भन्ने अपरिपक्क सोचका कारणले हत्या, आतंक र बलत्कारका घटनाहरू समाजमा अत्यन्त सहजतापूर्वक घटित हँुदै गरिरहेका छन् ।
हल्लाको पछाडि लाग्ने केही सोसल मिडियाले सकारात्मकभन्दा नकारात्मक प्रभाव बालमस्तिष्कमा तुलानात्मक रूपमा ६ गुणाले बढी असर देखाउने गर्दछ । अभिभावक स्वयम् उनीहरूसँग बसेर राम्रा कार्यक्रम देखाउने हो भने उनीहरू रचनात्मक पनि हुन सक्थे होलान् । कमिलालाई आफुभन्दा ३ गुणा ठुलो खानेकुरा ल्याउन कुनै शिव खेडाले मोटिभेसन गरेका थिएनन् । आजको बच्चालाई मोटिभेसन चाहिएको छ ।
बच्चालाई अभिभावकले काउन्सिल होइन क्लियारिटी गरिदिनुपर्छ के बन्ने र बनाउने त्यसको मोडेल प्रष्ट बनाइदिनुपर्छ । तर यसो गरिरहन हाम्रा अभिभावकलाई फुर्सत नै छैन । परिणमतः बालबालिकाहरुको सोचाइ नकारात्मकतिर गएको पत्तै हुँदैन ।
सन्तानलाई असल होइन ठूलो र धनी भएको देख्न चाहिरहेका छौँ । नाफाघाटामा छोराछोरीका सर्टिफिकेट हेर्छाैं । यी भविष्यका आशा हुन् । भोलिका निर्विकल्प भरोशा हुन् । तर आफू सामाजिक सञ्जालमा झुण्डिदै बालबालिकालाई किताब थुपारीदिएर पढ् भनी उल्लु बनाइरहेका छौं
आफ्नै मनले बालबालिकालाई टिभी. हेर्न दिँदा उनीहरू बढी स्वतन्त्र हुने गर्दछन् । अनि उनीहरूलाई जुन कुराले भावानात्मक रूपमा प्रभाव पार्दछ । नजानिदो रूपमा त्यसबाट प्रभावित हुने गर्दछन् । यसलाई संगत भन्ने गरिन्छ । संगत सँगै हिँडे हुने नहिँडे नहुने भन्ने हुँदैन ।
हरेक अभिभावक आफ्ना सन्तानसँग के चाहन्छन् ? स्पष्ट छ, स्वास्थ्य, खुसी, आनन्द, कर्तव्यको बोध, शैक्षिक र सामाजिक रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकोस्, जीवनको उद्देश्यप्रति सजग, परिवार तथा संस्कृतिप्रति आदरभाव, राष्ट्रियता भाव, तथा सबैप्रति स्नेही बनून् भन्ने नै हो ।
त्यसो हो भने हामीले दिएको समय र संस्कार त्यसका लागि पर्याप्त छ त । सबैले सोच्नुपर्ने कुरा यो हो कि हाम्रा सन्तान हार्नका लागि जन्मेका होइनन् । सन्तानले हारेको सपना संसारमै कुनै अभिभावक देख्न चाहदैनन् । त्यसैले सन्तानका सपना गन्तव्यमा पुर्याउन काँध थापिदिनै पर्छ । लक्ष्यसम्म पुर्याउन आत्मविश्वास भर्नैपर्छ । सन्तानले सधैं विश्वास र आशा चाहेको हुन्छ भन्ने कुरा अभिभावकलाई हेक्का हुनैपर्छ ।
भौतिक सुखसुविधाका कारण आफ्ना सन्तानहरूसँग मनग्य समय बिताउन नसक्दाका कतिपय अभिभावकहरु आवश्यक भौतिक सुविधा जुटाइदिने र जिम्मेवारीबाट उम्कने गर्छन् । विलासितामा समय बिताउन खोज्दा मानवीयता स्वतः समाप्त भएर जान थाल्दछ । भौतिक सुविधा बढ्न थालेपछि नैतिकता स्वतः घट्दै जाने कुरामा कुनै सन्देह छैन । यस्तो प्रवृत्ति शहरमा ज्यादा देख्न सकिन्छ ।
हामी सन्तानलाई सन्तानका रुपमा नहेरेर बिज्नेसका रुपमा हेरिरहेका र्छौं । आज सन्तानलाई असल होइन ठूलो र धनी भएको देख्न चाहिरहेका छौँ । नाफाघाटामा छोराछोरीका सर्टिफिकेट हेर्छाैं । यी भविष्यका आशा हुन् । भोलिका निर्विकल्प भरोशा हुन् । तर आफू सामाजिक सञ्जालमा झुण्डिदै बालबालिकालाई किताब थुपारीदिएर पढ् भनी उल्लु बनाइरहेका छौं ।
कस्तो विडम्बना हाम्रो माया जंकफुडमा साटिएर आएको छ । बच्चाले बाआमासित समय मागेको छ तर, आज बाबुआमासंग ओभर एस्पेक्टेसन छ । एउटा सन्तान छ उसलाई कस्तो शिक्षा दिने ? चना उमार्ने शिक्षा कि चना उमाल्ने शिक्षा दिने । बनाउने त एउटा हो ।
सन्तानलाई संस्कार होइन सर्टिफिकेटमा होडबाजी गराइरहेका छौं । माछा मार्ने शिक्षा होइन माछा खाने शिक्षा आर्जनमा जोड दिइरहेका छौं । शिक्षाको नाममा मेसिन बनाइरहेका छौँ विचार गरौँ । लाग्छ, हामी उल्टो दिशामा यात्रा गरेर सही स्थानमा पुग्ने हतारमा पो छौँ कि । आज बच्चाका कुरा सुनिएन भने भोलि बच्चाले अभिभावकका कुरा सुन्दैनन् ।
समयले कोल्टो फेरेको छ । यस्तो समय पनि थियो । अभिभावकको इसारामा सन्तानहरूको योजना बन्थ्यो । अभिभावकको स्वीकृतिविना कुनै काम हुनै सक्दैनथ्यो तर आज अभिभावकको लगाम बालबालिकाको हातमा पुगेको छ । उनीहरूको इसाराविना अभिभावक सोच्नसम्म पनि सक्दैनन् ।
यो कुरा निश्चित छ । बिरुवाको फल कस्तो छ भन्ने कुराको बिरुवाको बीज कस्तो थियो भन्ने कुरामा आधारित हुन्छ । मनोविज्ञान ‘जस्तो बीज उस्तै फल’ भनेजस्तै आमाको गर्भमा बच्चाको शुरुआत जस्तो हुन्छ । यसैको आधारमा जीवनको मार्ग कोरिएको हुन्छ । आमाको गर्भमा बच्चाको भावी कोरिन्छ । गर्भ जीवनभरिका लागि शक्तिसञ्चय र आधारशिला भएकाले आमाले सन्तानको शुभारम्म कालदेखि नै सजगता अपनाउनु बुद्धिमानी हुन्छ । त्यसैले आमाबुवाहरू बालकका अगाडि सधैँ असल उदाहरण बन्न सक्नुपर्छ ।
हरेक बालबालिका आफू कस्तो जीवनयापन गर्ने भन्ने कुराको रोलमोडल आफ्ना अभिभावकलाई देख्न चाहन्छ । जसरी एउटा धार भएको चक्कुसित होसियारी अपनाइन्छ, यही नियम हाम्रा सन्तानका लागि लागू हुने गर्दछ ।
अभिभावक बच्चाको नमुना हुन् । हामी जस्ता छौँ हाम्रो रचना पनि उस्तै हुने भएकाले प्रथमतः हामी उनीहरूका लागि आदर्श बन्न सिक्नुपर्छ । यसका लागि बच्चाहरूको कुरा सधैँ सुन्नुपर्दछ । बच्चाको कुरा सुनिएन भने ऊ आफैं जिउनसक्ने बाटो खोज्छ । त्यसैले बच्चाको अगाडि माया देखाउने गर्नुपर्छ । बच्चाको अगाडि सधैँ एकनास बन्नुपर्छ ।
सन्तानका साथीहरूलाई सम्मान गर्नु र उनीहरूलाई घरमा आउँदा स्वागत गर्नुपर्छ । अनुशासन र मर्यादालाई आफूले समेत कायम गर्नुपर्छ । सकेसम्म बच्चाहरूसँग समय बिताउने गर्नुपर्छ । यदि बच्चाले राम्रो काम गरेमा उनीहरूलाई त्यतिबेला नै स्यावासी दिने गर्दा हौसला मिल्छ । गाली गर्दा, तिम्रो त्यो खराब बानीलाई गरेको हो, तर तिमीलाई होइन भन्ने पार्नुपर्दछ । बच्चालाई घरमा सुरक्षित महसुस गराउनुपर्दछ । उनीहरूलाई आफूले गरेको मायाको बदलामा पछि गएर पैँचो फेर्नुपर्छ भन्ने भान गराउँनुहँुदैन । माया व्यापार होइन ।
यहाँ चित्रको होइन चरित्रको पूजा र मूल्य हुने भएकाले आफ्ना सन्तानलाई हामी स्वयम् नै चरित्रवान् भएर देखाउनुपर्छ । बच्चाको शारीरिक विकासका लागि आवश्यक पौष्टिक भोजन, व्यायम तथा विश्रामको उचित व्यवस्था भएको अवस्थामा मात्र शारीरिक विकास सम्भव हुने गर्दछ ।
भनिन्छ, डेढ वर्षको शिशुले कसलाई विश्वास गर्ने कसलाई नगर्ने थाहा पाइसकेको हुन्छ । ३ वर्षमा त इज्जत गरे नगरेको थाहा पाउँछ । त्यसैले भावनात्मक विकासका लागि म सुरक्षित छु, मेरो रक्षाका लागि मेरा अभिभावक सम्पूर्ण रूपमा समर्पित हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास जगाइ दिनुपर्दछ ।
समयअनुरूप हामी परिवर्तन हुन सकेनौँ भने कसैले हामीलाई पर्खेर बसिरहँदैन । परिवर्तनको शुभारम्भ सकारात्मक विचारबाट मात्र सम्भव हुनेछ किनभने विचार कर्मको बीज हो ।त्यसैले सकारात्मक सोचौँ, मीठो बोलौँ, कम बोलौँ र मधुर बोलौँ । सन्तानलाई आफुले चाहेको बाटोमा हिँड्न दवाब दिने काम बन्द गरौं । यो नै सम्पूर्ण समस्याको निदानको उपाय हुनसक्छ ।
निष्कर्षमा बालबालिकाका लागि प्रत्येक घर मन्दिर जस्तै बन्नुपर्दछ । प्रत्येक परिवारको सदस्य घुमिरहने मन्दिरका पुजारीजस्तै बन्नुपर्दछ । आमा भनेको उच्चस्तरको मूल पुजारीजस्तै हुनुपर्दछ । घरभित्रको ज्योति भनेको आपसी सम्मान, माया, ममता हो । परिवारमा विश्वास भनेको बत्ती (सलेदो) भयो भने मात्रै खुसी र सुखी परिवार हुनसक्छ ।
त्यसैले अभिभावकले आ–आफ्नै स्थानमा रहेर आपूmले गर्नुपर्ने जिम्मेवारीलाई इमान्दारितापूर्वक निर्वाह गरौँ । बच्चाको भविष्य निमार्ण गर्न अभिभावक र वच्चाका सपना एउटै हुनुपर्छ । युनिक बन्न अवश्य पनि समय लाग्छ । समय हजुरबा आमाको हातबाट फुत्किएर न्युक्लियर फेमिलीतिर प्रवेश हुदै छ । अब अभिभावकले बच्चालाई समय दिनैपर्छ । साथी बन्नै पर्छ । सन्तान सम्पत्तिले बन्दैनन् । सन्तान सस्ंकारले बन्छन् । आजका सन्तानले बाआमासित समय र संस्कार मागेका छन् ।
आफ्नो जिम्मेवारीलाई महशुस गरौँ । एकअर्कामा दोषारोपण गर्नु समस्याको मुलतः समाधान होइन । फगत समयको बर्बादी मात्र हो ।
थप २८८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, संक्रमितको संख्या २०९९ पुग्यो
बराहक्षेत्रमा क्वारेन्टाइनमा रहेका ३० जनाको स्वाब संकलन
पुष्पराज भट्टराई, काठमाडौं
विराटनगर । विराटनगरका युवाद्वारा अभिनित...
निरंकुश राणा शासनको अन्त्यसँगै उदय...